Sarimihetsika : misokatra ny fisoratana anarana amin’ny RFC | NewsMada
Sarimihetsika : misokatra ny fisoratana anarana amin’ny RFC
Misokatra indray ny varavaran’ny fikambanana « Rencontres du film » court ho an’ireo maniry ny handeha lavidavitra kokoa eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika. Efa mandeha ny fisoratana anarana sy fanaterana ny horonantsary ho an’ireo liana amin’ny fifaninanana, karakaraina mandritra ny « Festival Rencontres du film court » 2018.
Toy ny tato anatin’ny taona vitsivitsy izay, tsy natao ho an’ny eto an-toerana irery ny fifaninanana fa malalaka ho an’ireo mpanatontosa sarimihetsika, avy amin’ny firenena afrikanina ihany koa. Misy sokajy telo ny karazana horonantsary hifaninanana : ny « animation », ny horonantsary fanadihadiana, ary ny « fiction ».
Ho an’ny fifaninanana andraisan’ireo mpanatontosa avy aty Afrika anjara, tokony ho novokarina tamin’ny 2016 na tamin’ity taona ity ilay horonantsary. Tsy mihoatra ny 30 mn izany. Tokony ho tamin’ity 2017 ity kosa ny nivoahan’ilay sarimihetsika, raha toa ka Malagasy ilay mpifaninana.
Marihina fa hotanterahina ny 13 hatramin’ny 21 avrily 2018 ny andiany faha-13 amin’ny « Rencontres du film court », hany « festival » mahakasika ny sarimihetsika eto amintsika. Noho izany, hifarana ny voalohan’ny volana janoary ny fisoratana anarana amin’ny fifaninanana. Mbola hisy ny sivana hatao amin’ireo « film » hifaninana, mandritra ity « festival » ity.